XOG: Shan Sababood Oo Luka Modric Ku Riixaya In Uu Inter Milan Ku Biiro, Kulan Maanta Dhex Maraya Perez Iyo Madrid Iyo Waxa Laga Felayo Shirka Ay Yeelan Doonaan. - GOOL24.NET
XOG: Shan Sababood Oo Luka Modric Ku Riixaya In Uu Inter Milan Ku Biiro, Kulan Maanta Dhex Maraya Perez Iyo Madrid Iyo Waxa Laga Felayo Shirka Ay Yeelan Doonaan.
Xidiga xulka qaranka Croatia iyo kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa shalay dib ugu soo laabtay xarunta tababarka kooxdiisa kadib markii uu fasax dheeraad ah ka qaatay in xulka qarankiisa uu la soo gaadhay finalkii koobka aduunka laakiin fasax ka soo laabashadiisa waxaa hadheeyay xiisaha iyo dalabka uga yimid kooxda Inter Milan.
Maynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa isku dayaya in uu sidii uu Luka Modric kooxdiisa ugu sii hayn lahaa waxaana la filayaa in mushaar la mid ah ama ku dhaw kan Sergio Ramos loo soo bandhigi doono si uu u saxiixo heshiis cusub oo meesha ka saari kara dalabka lama xoogan ee uu Inter Milan ka helay.
Waxaa sidoo kale jira warar cusub oo soo baxay kuwaas oo ay Real Madrid ku doonayso in ay Luka Modric u soo bandhigto heshiis cusub kaas oo mushaarkiisa sare loogu qaado si meesha looga saaro in sababa dhaqaale ay kooxda ka saaraan iyada oo qaar ka mid ah wargaysyada Spain ay sheegeen in haddaba lagu dhaw yahay in heshiis buuxa laga gaadho mustaqbalka Modric.
Inter Milan ayaa Luka Modric u soo bandhigtay dalab lix sano ah oo uu ku qaadanayo 60 milyan euros taas oo la micno ah in ilaa 38 sano jirkiisa uu sanadkiiba qaadan doono 10 milyan euros halka uu hadda Real Madrid ka qaato 6.5 milyan euros waana farqi wayn oo dhaqaale oo u dhexeeya xaaladiisa hadda iyo dalabka Inter Milan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan sababood oo Luka Modric ku riixi kara in uu ku biiro Inter Milan isla markaana uu ka bixi karo kooxdiisa Real Madrid halkan ayaanad kaga bogan kartaa qodobadan oo faah faahsan.
1- Dalabka Inter Milan Oo Lama Diidaan Ah:
Qorshaha dalabka Inter Milan ayaa ah mid cajiib ah kaas oo Luka Modric ku qasbay in uu dib uga fikiro jacaylkii uu u qabay kooxdiisa Real Madrid. Ugu horayn Inter Milan ayaa boqolkiiba 54% sare u qaaday mushaarka uu hadda Modric ka qaato Real Madrid iyada oo ka dhigtay 10 milyan euros oo ayna cashuurtu ku jirin waana dalab dhaqaale ahaan aad u soo jiitay xidiga ree Croatia.
Mar laabadka Inter Milan oo adeegsanaysa mulkiilyaasheeda ree China ayaa dhigay dabin kale oo Modric indho sarcaad loogu sameeyay waxayna siiyeen fursada uu laba sano kaga soo ciyaari karo China isaga oo ah 37 iyo 38 sano jir isla markaana uu wali sii qaadan karo mushaar 10 milyan euros ah sanadkiiba.
Waxayna Inter Milan Modric u dabaanad qaaday in ilaa sanadka 2024 isaga oo 38 sano jir ah uu qaadan karo mushaar ka badan inta uu hadda oo uu xoog yahay ka qaato Real Madrid, waana sabab wayn oo xidiga ree Croatia ku qasbaysa in uu fursadn qaato.
2- Da’diisa Waynaatay Iyo Saamaynta Ay Yeelan Karto.
Caadiyan kooxaha waa wayn ee Yurub marka uu ciyaartoygu gaadho 33 sano jir waxaa hubaal ah in muhiimadii la siin jiray ay hoos u dhacdo wuxuuna Modric 33 sano jir noqon doonaa bisha soo socota ee September taas oo keenaysa in uu ka fikiro mustaqbalkiisa kubbada cagta ee kadib waayihiisa Real Madrid.
Luka Modric oo soo qaatay waayo ciyaareed oo aad u fiican ayaa sanadkan haysta fursad uu abaal marinta xidiga ugu fiican aduunka ugu guulaysan karo kadib markii uu kooxdiisa Madrid ku soo hogaamiyay Champions League isla markaana uu xulkiisa Craotia soo gaadhsiiyay finalka kooka aduunka.
Laakiin saamaynta qodobka labaad ee Madrid ka saari kara ayaa ah in uu hadda ka fikiri karo in waqtigiisii ugu fiicnaa ee kubbada cagta uu soo qaatay isla markaana uu koox kale ku biiro inta aanu si wayn hoos ugu dhicin qaab ciyaareedkiisu.
3- Koobakii Uu Kula Soo Guulaystay Real Madrid Iyo In Uu Tartan Kale Raadsado
Luka Modric ayaa Real Madrid kula soo guulaystay koob kasta oo heerka kooxeed ah, laakiin wali waxa uu xambaarsan yahay hamiga ah in uu koobab kale ku guulaysto balse taasi uma xamaasad badna sidii uu ahaa markii uu Madrid ku soo biiray wuxuuna hadda ka fikirayaa in tartan cusub iyo koobab kale oo koox kale uu la qaadaa ay farxadiisa iyo waayihiisa sii qurxin karto.
Markasta oo uu ciyaartoy ku wada guulaysto koobabka suurtogalka ah ee ay kooxdiisu qaadi karto waxaa hubaal ah in ay hoos u dhacayso hamigii iyo xiisihii uu qabay wuxuuna jecel yahay in uu markale bilaabo tartan cusub iyo xiiso cusub oo dhiiro galin siin kara.
4- Saamaynta Bixitaankii Cristiano Ronaldo Iyo Zinedine Zidane Ee Real Madrid:
Bixitaankii Cristiano Roanldo iyo Zinedine Zidane ee Real Madrid ayaa Luka Modric saamayn xoogan ku yeeshay isaga oo hore u sheegay in uu ka fikirayay in Ronaldo uu kooxda sii joogayo laakiin Modric oo si wayn horumar ugu soo hoos sameeyay Zidane ayaa arkay labadii xubnood ee kooxdiisa Madrid ugu muhiimsnaaa oo 40 maalmood gudahood kooxda ka wada baxay.
Bixitaankii Zidane iyo Ronaldo waxay Modric ku qasbeen in uu fikiro waxaana la fahansan yahay in uu wakiiladiisa ku wargaliyay hamigiisa taas oo keentay in ay xidhiidh la sameeyaan kooxda Inter Milan oo iyaduna sun u soo qooshtay Real Madrid.
5- In Uu Dariiqa Ronaldo Maro Oo Uu Ka Wada Ciyaaro Premier league, La Liga Iyo Serie A.
Cristiano Ronaldo ayaa sheegay in uu tartan cusub ugu biiray kooxda Juventus kadib markii uu ka soo ciyaaray Premier league iyo La Liga laakiin Modric ayaa isla dariiqan mari kara kadib markii uu isku soo muujiyay Premier league oo uu Tottenham uga soo ciyaaray iyo La Liga oo uu haddaba ka tirsan yahay Real Madrid.
Modric ayaa dareensan in ay jirto fursad uu kaga ciyaari karo horyaalka Talyaaniga si uu markale halkaas taariikh uga samayn karo laakiin wax walba waxay ku xidhanaan doonaan halka uu Perez iska taago go’aankiisa marka ay maanta oo khamiis ah kulan yeeshaan.